‘प्रेम गीत ३’मा प्रदीप खड्का संगै स्वस्तिमा खड्का र निती शाह ! – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainment‘प्रेम गीत ३’मा प्रदीप खड्का संगै स्वस्तिमा खड्का र निती शाह !
‘प्रेम गीत ३’मा प्रदीप खड्का संगै स्वस्तिमा खड्का र निती शाह !
April 8, 2019 Dipendra Ghimire Entertainment, Gossip, Kollywood, News 0
सन्तोष सेनको निर्माण रहने फिल्म ‘प्रेम गीत ३‘मा नायक प्रदीप खड्का र मिस नेपाल इन्टरनेशनल निती शाहको जोडी देखिने सम्भावना बढेर गएको छ । प्रदीप अभिनित फिल्म ‘लभ स्टेसन‘ हेर्न सिभिल मल पुगेकी शाहले फिल्म हेरे पश्चात पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै उक्त कुराको सम्भावना दर्शाएकी हुन् ।
प्रेम गीत ३ तपाईंलाई अफर गरिएको हो ? भन्ने जिज्ञासामा नितीले आफुलाई अफर आएको र खेल्ने सम्भावना धेरै रहेको प्रतिकृया दिइन् । धेरै फिल्ममा तपाईलाई अफर गरिएपनि खेल्नु भएको छैन, के ले रोक्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भनिन्,’रोकेको केही कुराले पनि होइन राम्रो स्कृप्टको पर्खाइमा थिएँ ।’ यो भनिरहँदा उनले प्रेम गीत ३ खेल्ने प्रती सकारात्मक रहेको बुझ्न सकिन्छ । यदी नितीले फिल्म साइन गरेको खण्डमा नायक प्रदीप खड्काको जोडीको रुपमा प्रेम गीत ३मा देखिने छिन् । प्रदीप र नितीले यसअघी डिस होमको विज्ञापनमा संगै काम गरिसकेका छन् ।
सोही फिल्मका लागि नायिका स्वस्तिमा खड्कालाई पनि अफर गरिएको विषयमा स्वस्तिमाले भने आफुलाई अहिले सम्म फिल्मको अफर नआएको र आएको खण्डमा सोच्न सकिने बताइन् ।
लभ स्टेसन हेर्नका लागि नायिका स्वस्तिमा खड्का, केकी अधिकारी, ऋचा शर्मा, निर्देशक विशाल भण्डारी, मिस नेपाल इन्टरनेशनल निती शाह लगायत पुगेका थिए । फिल्म हेरेका कलाकारहरुले फिल्म उत्कृष्ट बनेको प्रतिकृया दिए । शुक्रवारबाट प्रदर्शनमा आएको फिल्मले दर्शकको उल्लेख्य साथ पाइरहेको छ । उज्ज्वल घिमिरेको निर्देशनमा काफिया फिल्म्सको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्मलाई गोबिन्द शाहीले निर्माण गरेका हुन् ।
‘प्रेम दिवस’ को ‘बोरु अर्को जुनी’ सार्वजनिक
दिपकराज गिरीको ‘छ माया छपक्कै’ निर्माण घोषणा